Japana: Ahoana ny fahitana ny tranonkala Japoney (Fizarana fahatelo) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2018 3:31 GMT
Tohin'ny Fizarana faharoa.
Ho ohatra amin'ireo tranonkala japoney izay tsy “mandiso fanantenana” mihitsy, bilaogera marobe no niresaka ny fahombiazan'ny tranonkala fizarana lahatsary Nico Nico Douga. Bilaogera Dan Kog niresaka momba ny tranonkalan'ny sakafo Cook Pad (izay nampahafantarina ny daholobe herinandro vitsivitsy lasa izay) sy ny Yahoo! Japana ho ohatra mipendrapendrana.
Romeo ao amin'ny OpenMediaLaboratory tsy nahita fahadisoanaamin'ny tondro ankehitriny:
Ichiru ao amin'ny Kotori Piyopiyo manamarika fa matanjaka be ao amin'ny tranonkala Anglisy koa ny zana-kolontsaina ary ny fahasamihafana dia ny maha-“olona ambony azy ireo” sy maha-“matihanina azy ireo” no ahazotoany mampiasa ny servisin-tranonkala, ary koa mampiasa vola amin'ny tranonkala, mametraka doka ary mifandray amin'ny alalan'ny bilaogy sy ny tolotra ara-tsosialy”. Manontany tena izy hoe ny tsy fahampian'ny ezaky ny sangany japoney ve no mahatonga ny “fahadisoam-panantenana” ary nanolo-kevitra hoe:
Nanaiky ny antsafa ho fanamby avy amin'i Umeda sy Yuka Okada mpanao gazety izy, ary manomana hetsika ankehitriny, izay nantsoina vonjimaika hoe ‘Web Innovation Summit’ mba ahafahan'ny olona mampahafantatra tolotra sy fitaovana aterineto izay hampiroborobo ny tranonkala Japoney.